Somaliland Societies in Europe | Anti-Tribalism
← Warbixin lagu shegay inay magaaloyin katirsan puntland kafaa’ideen burcad badeeda.
Heeso wadani ah Dareenka sanadka 2012 →
Somaliland Societies in Europe
Baaq ku waajahan go’aamada ka
soo baxay shirka Taleex
Og: Goleyaasha kale ee Dowladda
Ururka kulmiya jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) waxa uu walaac weyn ka muujinayaa isimada iyo ergooyinka kala duwan ee Taleex qalinka ku duugey sameynta maamul goboleed. Kaas oo la filayo inay si rasmi ugu dhawaaqaan.
Sida aynu la wada soconno Jamhuuriyadda Somaliland midnimadeeda iyo qaranimadeedu waa mid salka ku haysa taariikh adag oo aan mugdi iyo shaki la gelin karin isla markaana dhidibadeeda iyo aasaaskeeda dib loo adkeeyay markii dhammaan beelaha Jamhuuriyadda Somaliland ay si wadajir ah qalinka ugu duugeen markii la isugu yimid kulan weynihii Burco ee mar labaad lagula soo noqdey qaranimada iyo jiritaanka Somaliland sannadkii 1991(kii).
Kulankan Taleex run ahaantii waa mid dhagar iyo khiyaamo ay ku jirto isla markaana la rabo in Somaliland la wiiqo siyaasaddeeda ku salaysan nabadda iyo wada-noolaanshaha beelaha ku dhaqan Somaliland .
– In xukuumadda Somaliland ay mawqif adag iska taagto go’aamada siyaasadeed ee ka soo baxay kulanka Taleex isla markaana lala yimaaddo istaraatajiyooyinkii iyo tabihii xal u noqon lahaa go’aamadan ay ka muuqato degdegga iyo mas’uuliyad darradu.
– Ururka SSE waxa uu xukuumadda, golayaasha kale ee qaranka iyo dhammaan asxaabta qaranka ka codsanayaa in arrimahan ka soo baxay Taleex ay noqdaan qaar lagu wada eego aragti isku mid ah iyadoo laga duulayo midnimada ummadda Jamhuuriyadda Somaliland oo la’aanteed aanay suuro gal aheyn in qaranka Somaliland uu noqdo mid si fiican u hana qaada.
– Ururka SSE waxa uu si gaar ah codsi ugu soo gudubinayaa dhammaan ergooyinka ku shiraya kulanka Taleex ee ay ka mid yihiin isimada, garaadyada, culumada, waxgaradka, aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee ka socda beesha.
Waxa aannu si xushmadi ku jirto idiinka codsanaynaa in la isla fahmo danta guud ee ka dhaxeysa bulshoweynta Jamhuuriyadda Somaliland oo ay u horreyso ilaalinta xasilloonida iyo nabadda ay aadku ugu baahan yihiin jiilka maanta jooga iyo ka soo socda.
– Ururka SSE Waxa uu idinla garab taagannahay hiil haddii ay jiraan arrimo u baahan in la xaaleeyo oo u baahan in si heer qaran ah looga wada hadlo, laakiin waxa iyaduna aad iyo aad muhiim u ah in laga diktoonaado wax dhaawacaya qaranimada iyo gooni isu-taagga Somaliland oo ah barta ina kulmisa oo iyadu aan gorgortan gelin.
Guddiga Fulinta ee Dalladda SSE
Maxamed Bashe Xaaji Xasan Xooghayaha iyo dhaqaale hayaha SSE